Itoobiya: Somaliland iyo Puntland waxaan u aqoonsannahay inay hoostagaan Soomaaliya | Goojacade
Home Somalia Itoobiya: Somaliland iyo Puntland waxaan u aqoonsannahay inay hoostagaan Soomaaliya
Itoobiya waxay sheegtay inay aqoonsan tahay madaxbanaanida Soomaaliya.
Ka gudub Twitter daabacaad W.Q @ygaraad
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Ethiopia dalalka ay ku leedahay ergo diblomaasiyadeed waxay ku dartay Puntland, Somaliland iyo Soomaaliya.
Dowladdeennu ma aha in ay u aammusto sidii ay u aammustay markii Ethiopia iyo #Somalia ay isku dartyay Addis Ababa.http://www.mfa.gov.et/home/Missions 34310:31 PM – May 28, 2019Twitter Ads info and privacy226 people are talking about this
Dhammaadka Twitter daabacaadda qore @ygaraad
Ka gudub Twitter daabacaad W.Q @Aynte
Wagar! Haddii ay cudur daar ka bixisay khariidaddii dhul ballaarsiga aheyd, kuna sifeysay “khalad dhacay” tanina maxay noqon doontaa tolow? Hubaal waxaa ah inaysan il-duuf aheyne waxaa jira dhaqan taban oo si qoto dheer u dafirsan midnimada & madax bannaanida gayiga Soomaalida.Yusuf Garaad✔@ygaraadWasaaradda Arrimaha Dibadda Ethiopia dalalka ay ku leedahay ergo diblomaasiyadeed waxay ku dartay Puntland, Somaliland iyo Soomaaliya.
Dowladdeennu ma aha in ay u aammusto sidii ay u aammustay markii Ethiopia iyo #Somalia ay isku dartyay Addis Ababa.http://www.mfa.gov.et/home/Missions 13810:48 PM – May 28, 2019Twitter Ads info and privacy100 people are talking about this
Dhammaadka Twitter daabacaadda qore @Aynte
Previous articleRagga jirdhiska badsada oo halis ugu jira inay madhalays noqdaan
Next articleSiyaasi reer Iran ah oo afadiisii dilay isla markaasna telefishinka ka qirtay.